ị bụ ebe a: Home Atụmatụ Ụgwọ maka ntu.
Ejiji ka mgbe tụziri anyị iwu.
Na taa dictates. More na nso nso,, Nne anyị maara naanị pink ntu faịlụ na ntu polishes. Ma ịkpụcha mbọ aka teknụzụ evolve na eguzola. Ihe niile na-agbanwe agbanwe - n'ụdị, mpịakọta, agba. Na ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ịhụ ndị dị otú ahụ a dịgasị iche iche nke onye style. Na n'okporo ámá ị pụrụ mgbe mgbe achọta ọ bụghị nanị Man, ijuanya ndị, ma Man. Ihe na-ekpebi ha - dịghị onye maara.
Nwere na gị obere akpa niile palette nke varnishes na ha nile collection maka a zuru okè ịkpụcha mbọ aka bụ zuru ezu. Ga-enwe ike ihe pụrụ iche. Iji mee nke a, ị nwere ike banye maka pụrụ iche ntu ọmụmụ, ndị na-eri bụghị kwa elu. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na ị ga-enwe ike inweta nkà, na ma eleghị anya na-capitalize on a.
Ntu bụ ihe kasị nkịtị usoro na ihe ọ bụla maa mma Ụlọ Mmanya, ịma mma parlor. A di na nwunye nke afọ gara aga, usoro maka imeziwanye ọdịdị nwere ike na-eji ndị ọgaranya ladies. mgbe ahụ, ikike a mara n'etiti brides. The usoro na-eri bụ nnọọ oké ọnụ na-adịghị onye ọ bụla n'ime ụmụ agbọghọ, ndị inyom, Anyị nwere ike inye ndị okomoko. Ma ugboro na-agbanwe agbanwe. Ugbu a ọ bụla n'ime anyị nwere ike ịgbanwe maka obere ego.
E nwere ọmụmụ, n'ihi na ndị ọkachamara, na-emebu ịkpụcha mbọ aka Fans. ma ndị, na ndị ọzọ na, Ruru eru andikpep na-ezikwa ndị dị mkpa nwere, ịmụta banyere ndị ọhụrụ na ọnọdụ na ọhụrụ mbiet style.
The usoro nke ntu Na ọ pụtara na-abawanye na aka wuru ntu, n'otu oge ahụ nke na-agbazi ntụpọ nke eke efere (stratification, fragility, congenital ọrịa, wdg). E nwere ọtụtụ ụdị nke ntu:
N'adịghị ka data ụdị ọ bụla ọzọ na na, na ntu na-incremented site iche iche ihe - acrylic jel ma ọ bụ. N'ihi ya, mbọ-aghọ a ọhụrụ ụdị, Ha na-enwe ahụ iru ala na inogide, emebila na-adịghị exfoliate.
Na mgbakwunye na abawanye, Onye ọ bụla n'ezie akwụkwọ a kwesịrị maara ihe nile banyere ihe owuwu ma na mejupụtara nke ntu, on kpọmkwem ọrịa, ha mgbochi na ọgwụgwọ, nakwa dị ka aka wuru mbọ mgbazi. dị ka a na-achị, na-arụ mgbidi keakamere ihe onwunwe, onwe ntu anaghị akwụsị na-eto eto. Na regrown akụkụ nwere ike ịgbanwe udi nke ntu efere Accreted. A na-achọ a oge 2-3 izu ịga nna ya ukwu na ime mgbanwe.
Gịnị na-amụ na ndị dị otú ahụ ọmụmụ?
All nke jel mkpuchi, echiche ya (otu-adọ, biphasic, atọ adọ).
All nke acrylic mkpuchi.
French ịkpụcha mbọ aka na mm uo ozi ma ọ bụ acrylics.
Ịme anwansị nke wuru mbọ, ma hanwa ma, na na ihe acha gels, acha acrylics.
Basics nke ji achọ sere mbọ.
Bara uru ọzụzụ ọmụmụ na-eduzi na ụdị. ihu ọma, Ọmụmụ ndị dị otú ahụ ụdị adịghị inye, otú onye nkụzi nwere ike ịjụ ime ka mmadụ si ọkọfiọkde.
Ntu-enye ohere ka anya dị ka ihe nlereanya na cover nke a kenkowaputa magazine, Lady na manicured mbọ. Nke a na usoro nwere ike rụrụ onwe ha, ma ọ bụrụ na ị na-amụta na nke a on ọmụmụ, eji a dịgasị iche iche nke pụtara. Banyere dị iche iche usoro arị elu nke wuru mbọ ike ịgwa naanị ahụmahụ na ruru eru ọkachamara.